नचिनेका नम्बरबाट आएको फोन कसले गर्यो भन्ने पत्ता लाग्ने नेपाली एप्स - Living with ICT
Home / Featured / नचिनेका नम्बरबाट आएको फोन कसले गर्यो भन्ने पत्ता लाग्ने नेपाली एप्स
नचिनेका नम्बरबाट आएको फोन कसले गर्यो भन्ने पत्ता लाग्ने नेपाली एप्स
Shiva Basnet Mar 8, 2017	1 Comment
तपाईँको मोबाइलमा सेभ नभएको वा नचिनेको नम्बरबाट आएको फोन कसले गरेको हो भनेर सजिलै पत्ता लाग्ने एप्स नेपाली बजारमा आएको छ । कुनै नचिनेको नम्बरबाट आएको फोन होस् वा सेभ नगरेको नम्बर, तपाइँले यो एप्स डाउनलोड गर्नुभयो भने तपाइँलाई फोन गर्ने व्यक्तिको नाम सहजै पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ ।
तपाइँको मोबाइलमा घण्टी बज्नासाथ कसले फोन गरेको हो भन्ने कुरा सहजै पत्ता लाग्छ । नेपालीले नेपालीकै लागि बनाएको यो एप्स नेपाली बजारमा पहिलो हो । नेपाली बजारमा पनि केही यस्ता एप्स छन् जो तपाइँको दैनिक जनजीवनमा महत्वपूर्ण सावित भएका छन् । अब तपाइँ सिधै गुगल प्लेस्टोरमा गएर नेपालीले नेपालीकै लागि बनाएको यो एप्स प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ ।
विश्व बजारमा एप्सको प्रतिष्पर्धा भैरहेका बेला नेपाली बजारमा पनि त्यस्तै खालका एप्सहरु सार्वजनिक हुने क्रममा मोबाइल प्रयोगकर्तालाई ध्यानमा राखेर “Nepal Caller : नेपाल कलर ” गुगल प्लेस्टोरमा राखिएको हो । अहिले यो एप्लिकेसन एन्ड्रोइड भर्सनमा मात्र उपलब्ध रहेको र यस एपले छिट्टै प्रयोगकर्ताको विश्वास जित्ने एप निर्माता कम्पनी अाइटेक नेपाल डटकमले अपेक्षाा राखेकाे छ ।
तपाइँको मोबाइलमा रहेको गुगल प्ले स्टोरमा जानुहोस्, “Nepal Caller” सर्च गर्नुहोस् । अनि त्यसमा क्लिक गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ । डाउनलोडका लागि यो लिंकमा पनि जान सक्नुहुनेछ
Previous ओप्पोले २०+८ मेगापिक्सलको डुअल फ्रन्ट सेल्फी क्यामेरा स्मार्टफोन सार्वजनिक गर्ने
Next बलिउड स्टार सलमान खानले ‘बिङस्मार्ट’ ब्राण्डको स्मार्टफोन ल्याउँदै
Mar 9, 2017 at 10:40 pm
यो जाठो एप्स के के न होला भनेर हतारमा डाउन्लोड गरेको आलु पर्यो । केही न काम को सेफ गरेको त नम्बर पुरैमा देखाउदैन नगरेको कहाँ बाट देखओस प्रमोसन पनि कसेरी भाको ? दुनिया लुट्न पल्केका हरुले बनाको होला ।। यो एप्स बाट तपाइलाइ फाइदा हैन ९९% घाटा हुन्छ ? सक्छौ राम्रो बनाउ र प्रमोसन गर सक्दैनौ एस्तो बनाएर जनता झुक्याउने काम नगर । यो मुला शेर गर्नेले पनि बिचार गरेर त गर्नु पर्छ कल गर्दा नाम आउला भनेको त बिज्ञापन आउँछ ? हा हा हा कमेडी एप्स रहिछ हेर i tech nepal को बिजोग ? त्यो पनि कम्पनीले बनाको ? हैन कुन प्रकारले राम्रो भयो र काम गर्यो ? खै त देखएन त ? लेख्न पाई भन्दैमा जसले जे दियो तेहि लेख्न त मिलेन नि ? हो कि हैन चेक गरेर लेख्नुहोला !!